तपाईंको प्यान्टीको आकारले तपाईंको व्यक्तित्वको बारेमा के प्रकट गर्दछ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - INSYNC
तपाईंको पन्टीको आकारले तपाईंको व्यक्तित्वको बारेमा के प्रकट गर्दछ
समाचार डब्ल्यूएचओले बजारमा कब्जा गरिएको प्रत्यक्ष जंगली जनावरहरूको बिक्री रोक्न देशहरूलाई आग्रह गर्दछ
घर Insync प्रेस पल्स ओआई-सैदा फराह द्वारा सैदा फराह नूर फेब्रुअरी १२, २०१ on मा
त्यहाँ व्यक्तिले व्यक्तिको व्यक्तित्वको बारेमा पत्ता लगाउन सक्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। व्यक्तिको व्यवहारबाट तपाईंको औंलाको आकार सम्म तपाईं लगाउने लुगाको प्रकार सम्म, तपाईंको व्यक्तित्व परिभाषित गर्न सकिन्छ।
यहाँ यस लेखमा, हामी कसरी एक महिला व्यक्तित्व उनको panty को आकार द्वारा परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्ने बारे मा खुलासा गर्दै छौं।
ठीक छ, यो हास्यास्पद देखिन्छ, तर हो, यो सत्य हो! एउटा अनुसन्धानले प्रमाणित गर्‍यो कि व्यक्तिहरू जसले तल उल्लेखित १० प्रकारका प्यान्टीहरू मध्ये कुनै पनि लगाउन रुचाउँछन् उनीहरूको परिभाषित व्यक्तित्व हुन्छ भनिन्छ।
एक व्यक्तिको व्यक्तित्व विशेषता अंडरवियरको आकारबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ जुन उसले नियमित आधारमा सबैभन्दा बढी लगाउँछ। यो जाँच गर्नुहोस् ...
भगवान मूर्तिहरूले कुन दिशाको सामना गर्नुपर्दछ
यो panty को एक विश्व प्रसिद्ध डिजाइन हो जुन महिलाले लगाएको मन पराउँछन्! यो सामान्यतया महिलाहरु जो आउटडोर, एथलेटिक र स्पोर्टी हुन् द्वारा लगाइन्छ। यी महिलाहरु आफ्नो शरीर संग अत्यधिक आरामदायक मानिन्छ। अर्कोतर्फ, तिनीहरू पनि चंचल र सेक्सी हुन सक्छन् र एकै साथ तिनीहरू गम्भीर र व्यावहारिक पनि हुन सक्छन्!
यस प्रकारको panty सामान्यतया व्यक्तिहरूले लगाउँदछन् जो चेकी पनि हुन्छन्। यी व्यक्तिहरू सामान्यतया सचेत, स्मार्ट, बुद्धिमत्ता र एकै समयमा हास्यास्पद छन्। तिनीहरू छिटो नै एक ठट्टामा जवाफ दिए जस्तो देखिन्छ। यस बाहेक, तिनीहरू पनि चंचल र आकर्षक हुन मन पराउछन्।
यी व्यक्तिहरू आफ्नै छालामा अत्यन्त सहज छन्। एक नियमित आधारमा panty को यो आकार लगाउने व्यक्ति आत्मविश्वास र स्वतन्त्र भनिन्छ। तिनीहरू आफूसँग भएको कुरा देखाउनदेखि पछि हट्दैनन्! यस आकारको जाँघिया लगाउने पुरुषहरूले उनीहरूको सम्पत्तीलाई बढावा दिने भनिएको छ भने, अर्कोतर्फ महिलाहरूले आफ्नो शरीरको प्रदर्शन गर्न सक्ने ढ in्गले पोशाक लगाउँदछन्।
यद्यपि यो प्यान्टी टी-स्ट्रिंग जस्तै देखिन्छ, व्यक्तिको विशेषताहरू फरक देखिन्छ। यी व्यक्तिहरूले काम र रमाईलो सजिलोसँग सन्तुलनमा राख्न सक्छन्। किनकि यी व्यक्तिहरू आफ्नै छालामा सहज छन्, उनीहरू आफ्नो शरीरको पनि राम्रो व्यवहार गर्न मन पराउँछन्।
थाongs्ग्स विश्वका कोनाभरिबाट प्यान्टीको सबैभन्दा प्रख्यात आकार हो जसमा लगाउन मन पर्छ। यस प्रकारका जाँघाहरू उनीहरूका लागि हुन् जो महत्वाकांक्षी, प्रेरित र सफल हुन प्रेरित छन्। उनीहरूको आराम क्षेत्रबाट बाहिर रहनु भनेको उनीहरूलाई चिन्तित पार्ने कुरा होइन किनकि तिनीहरू आफ्नो सफलताको अर्को चरणमा पुग्न व्यस्त छन्!
टाanga्गा एक प्रकारको प्यान्टी हो जुन प्रायः व्यक्ति द्वारा रुचि गरिन्छ जुन प्रकृतिमा परम्परागत हुन्छ। तिनीहरूसँग निरन्तर प्रगतिशील विचारहरू छन्। अर्कोतर्फ, तिनीहरू जीवनको साधारण चीजहरूको आनन्द लिन सक्दछन् र आफ्ना साथीहरूको घनिष्ठ सर्कल खुला मनका हुन मनपर्दछन्।
'Hipster' panty एक panty हो जो शॉर्ट्स र अंडरवियर बीचको क्रसको रूपमा परिभाषित हुन्छ। यस प्रकारका जाँघिया सामान्यतया व्यक्ति द्वारा लगाउँदछन् जो एकनिष्ठ र शान्त हुन्छन्। यी व्यक्तिहरूको न्याय गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि उनीहरूले तपाईंलाई तिनीहरूको व्यक्तित्वको अर्को तहको साथ आश्चर्यचकित गर्न सक्दछन्।
जाँघो को यो आकार सामान्यतया बाहिर जाने व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरूले लगाउँदछन्। यी व्यक्तिहरू खेलकुद र खेलकुद हुन्। यी पनि बाहिरी गतिविधिहरु मा संलग्न गर्न मन।
व्यक्ति जो यस प्रकारको अण्डवियर लगाउन रुचाउँछन् प्राय: व्यावहारिकता र सान्त्वनाको ख्याल गर्न पहिले देखिनको सट्टा चिनिन्छ। अर्को तर्फ, तिनीहरू पनि गाह्रो अवस्थामा शान्त रहनको लागि परिचित छन् र डरको साटो समाधानहरूको सोच्दछन्।
यस प्रकारको अण्डवियर तिनीहरूको लागि हो जो सजिलै जाने र रमाईलो मायालु छन्। यी व्यक्तिहरूले अरू व्यक्तिको रायको बारेमा धेरै ध्यान दिँदैनन्। तिनीहरूसँग अरूलाई सान्त्वना दिनको लागि जन्मजात क्षमता हो भनेर जानिन्छ।
त्यसोभए तपाईं परिणामसँग सहमत हुनुहुन्छ? हामीलाई तल टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्।
संयोजन छाला को लागी सबै भन्दा राम्रो कॉम्प्याक्ट पाउडर
के हामी दैनिक मुलतानी मिट्टी प्रयोग गर्न सक्छौं?
प्यारा तो होना था था आज है सगाई
के म कुखुरापोस् पछि कुखुरा खान सक्छु?
बच्चाहरूबाट अभिभावकहरूको लागि २th औं वार्षिकोत्त्व उद्धरण